# ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရာပြည့် ပိုစတာဒီဇိုင်း ☆ ☆ GENERAL AUNG SAN CENTENARY ☆ ☆ | democracy for burma
# ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရာပြည့် ပိုစတာဒီဇိုင်း ☆ ☆ GENERAL AUNG SAN CENTENARY ☆ ☆
tags: ပန်းချီ၊ ဒီဇိုင်း ကိုမျ, ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရာပြည့် ပိုစတာဒီဇိုင်း, ☆ BOGYOKE AUNG SAN'S 100 YEARS ANNIVERSARY ☆, Bogyoke Aung San, Burma, independence day, KO MYOE GRAPHIC DESIGN, Myanmar
☆ GENERAL AUNG SAN CENTENARY ☆ ☆ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် ☆ -graphic design: ko myoe 88 ” လူထု နဲ့ တိုင်းပြည် ရဲ့ မျက်နှာကိုထောက်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားဆောင်ရွက်ကြ….!!! ” ☆ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ☆ ☆ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ☆
☆ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရာပြည့် ပိုစတာဒီဇိုင်း ☆ – ပန်းချီ၊ ဒီဇိုင်း ကိုမျိုး (၈၈)Ko Myoe-graphic design ☆ BOGYOKE AUNG SAN’S 100 YEARS ANNIVERSARY ☆ Share this:TwitterFacebookPrintPinterestRedditLike this:Like Loading...
← #เจ้าเครือเงิน #ผบ. #ทหาร #SSA #ออกประกาศถึง ผู้รักเชื้อชาติบ้านเมือง #ทุกคน #ARMY #NEEDS #HELP
#thaisouth #2 #muslim #terrorists #killed #firefight #Narathiwat →